I-SEO kunye noThengiso lweMpahla kunye ne-ndash; I-Semalt Shares Ukwahlukana Okufuneka Ukufunde
I-SEO kunye noThengiso lweMpahla kunye ne- - I-Semalt Shares Ukwahlukana Okufuneka Ukufunde
Kuzo naziphi na i-intanethi yezoshishino, ukuthengiswa kwe-digital kungenza intliziyo yenkxaso yabafundi abakhulayo.Ngokomzekelo, abathengisi be-intanethi basebenzisa iindlela ezibalulekileyo ezifana ne-Search Engine Optimization (SEO) okanye ukuThengiswa kweNkcukacha. Nangona kunjalo,Ukwazi umehluko phakathi kwe-SEO kunye nokuthengiswa komxholo kungabi lula. Kukho ukufana okuninzi phakathi kwezi ndlela ezimbinilokufumana abaxumi kwi-intanethi - ltc insurance florida. Ukuze kube ngakumbi, i-SEO imakethe yokuthengisa. Ngelo xesha, ukuthengiswa komxholo kukwa-SEO.
Ukunciphisa ukudideka, uMphathi weMpumelelo yoMthengi iSemalt ,ULis Mitchell, unoluhlu lweendlela ezahlukeneyo zokuchazela ubudlelwane phakathi kwe-SEO kunye nokuthengiswa komxholo.
Umahluko phakathi kwe-SEO kunye nokuthengiswa kokuqukethwe
I-SEO kunye nokuthengiswa kokuqukethwe akuqhelekanga kudibene. Kungakhathaliseki ukuba zininzi kangakananiImiba emibini ibonakala idibanisa kunye, ezinye zezinto zazo zihamba. Enye impazamo enkulu yabathengisi banokwenza inkolelo yokuba umxholoukuthengisa kususa isidingo se-SEO. Le ngcamango inokudukisa umntu kwaye ibangele kwizinga lewebhu ngokungahambanga kakuhle ngenxa yokungalandeliImpawu eziphambili zenzelwe ngamnye.
Le mpazamo ibonakala ngendlela abantu bahambelana ngayo nemiba eyahlukeneyonganye nganye. Ngokomzekelo, i-SEO ithetha iindlela zokuthengisa zedijithali ezinjengeenkcukacha ezifanelekileyo zokuphenya, ukudala umxholo, intlaloukuthengiswa kweendaba, ukudibanisa kunye noyilo lwewebhusayithi ngaphezu kwamanye amaparitha..Ngakolunye uhlangothi, ukuthengiswa kokuqukethwe kubandakanya ukudala umxholo.Enye yeendlela zeGoogle zokubeka i-website, ngokubandakanya iinkalo ezifana nokubaluleka komxholo, ubude beposi, i-SMMkunye neendawo ezithile ze-SEO.
Njani i-SEO kunye nokuthengiswa kwezinto ezichaphazelekayo
Ukujonga i-SEO kunye nokuthengiswa komxholo njengemibutho eyahlukileyo kunokudala into engalungangangcamango yezo zibini. Okokuqala, i-SEO iyinxalenye yokumaketha kokuqukethwe, nangona kungabikho ngokupheleleyo. Le nyaniso ibonakala ngenxa yezinto ezinjeukugcinwa kokuqukethwe, iimeta zeemeta kunye nenkcazelo yeemeta, ukudibanisa imidiya yoluntu kwakunye nokukhethwa kwegama elingundoqo kunye nophuhliso. Ngoko ke, ezinye zazole micimbi ihambelana, ukwenza ezimbini zezixhobo zentengiso ye-intanethi yee-10.
Kuzo zonke iinkalo ze-SEO okanye ukuthengiswa kokuqukethwe, kukho ubuchule beenye. Ukuze unciphise ukudideka, i-SEO kunye nokuthengiswa kokuqukethwe zihlukile kwezinye iindlela. Njengokuba:
I-SEO ifaka isixube esincinci xa kuvela ekudalweni kwendalo kunye nokuthumelakunokuthengiswa kokuqukethwe. Iquka izinto ezininzi zobugcisa bokusebenzisa iwebhusayithi. Ngelo xesha, ukuthengiswa komxholo kubandakanya ukuphuhlisaumxholo, oya kufuna i-SEO ukubonakala kwe-inthanethi.
Ukusebenzisa i-SEO kunye nokuthengiswa komxholo kuyahluke. Ngokomzekelo, i-SEO ithethangokuzenzekelayo izinto ezithile zobugcisa bokuthengiswa komxholo. Ukuphela kwendlela yokuthengiswa kokubhaliweyo kunengqiqo ngokusetyenziswa kweyiphi naISOO.
Kwiyiphi na i-intanethi ye-intanethi yokuphumelela ukunqoba ukhuphiswano lwabo, bobabili i-SEOkunye nokuthengiswa kokuqukethwe kufuneka ukuba. Ngokomzekelo, i-SEO inamacandelo amaninzi kunye nezixhobo zobugcisa okufuneka ukuthengiswa komxholo kusebenzengokufanelekileyo. Kwezinye iimeko, i-SEO incike kwiinkcukacha ezitholakala kuphela ekuthengiseni umxholo. Ukuchonga umahluko kunye nokwazingubani na onokubaluleka ukuze aphumelele kwi-intanethi. Ngenxa yoko, iindlela zokuthengisa ezithengiswayo kwi-intanethi zizimeleyo kwaye zinokukunceda ukubalaiwebhusayithi ephakamileyo kwiinjine zokukhangela.